Saamayn intee le’eg buu ku leeyahay sirdoonka Sudan arimaha Somaliya? – Idil News
Saamayn intee le’eg buu ku leeyahay sirdoonka Sudan arimaha Somaliya?
Posted By: Jibril Qoobey January 19, 2019
Madaxa Sirdoonka Suudaan: 5 Sano Ayuu Jagadan Hayey, Waxaana Loo Xiray Afgambinta Al-bashiir.
Agaasimha Guud ee Sirdoonka Suudaan Saalix Cabdalla Maxamed(Qoosh) ayaa booqasho waxaa uu ku yimid marsii horaysay Magaalada Muqdisho waxaana soo dhoweeyay dhiggiisa xiligaa isna aha, agaasimha Nisa Xuseen Cusmaan Xouseen.
Sirdoonka waxaa uu ka qabtay jagooyin badan sida ku-xigeenka agaasimaha howl-gallada, shaqada sirdoonka waxaa uu ka tagay 1996 kadib markii isaga iyo saraakiil kale lagu tuhmay inay shirqool ku dilli rabeen Xusni Mubarak. Waxaa uu sidoo kale noqday maamulaha warshad hubka sameysa iyo Xildhibaan ka tirsan golaha shacabka.
Hadaba waxaan u socdaa ina Somaliya dadka Qasaya ee islaamiyinta ah inta Badan inay Sudan wax ku soo bartaan waxaana la xidhiidhanayaa Awooda sirdoon ee Dalkaasi ku leeyahay Qaska Dalkeena.
Waxaan xasuustaa xili ay Deeganka Somalida ee Itobiya ayay Xadhig ku bilawday Dhalinyarada Jaamacadaha Suudan wax ku soo bartay Xiligaa kadib ayaan Ogaada u jeedada.
Majiro Dal inoo Nasteexa midkastaa ujeedo ayuu inaga leeyahay Somaliyeey.